Hab dhaqankii howlgalka boliiska ayey ku tunteen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sinthu Selvarajah, sumadda boliiska iyo caalinka Dennis Töllborg. Sawirle: Privat/Henrik Montgomery och Anders Wejrot/TT.
Hab dhaqankii howlgalka boliiska ayey ku tunteen
Wada-hadal in la tijaabiyo
La daabacay fredag 27 november 2015 kl 12.30
Xogag hor leh ayaa ka soo baxaya tacadigii aan wanaagsanayn ee ciidanka ammaanka, middaasina oo sabab u noqotay geeridii 28 jirkii lagu magacaabi jiray Sinthu Selvarajah ee ka dhacday cusbitalka magaalada Västerås.
Baaritaan ay sameeeysay laanta wararka ee Ekot ayaa muujinaya in shanta sarkaal ee ciidanka ammaanka ee timid qaybta maskaxda ee cusbitalka oo keliya ey ku sugnaayeeen laba daqiiqadood intii aaney go’aan-san howl-gal xoogg ah iney qaadaan – halka dhanka kale uu uu hab-dhaqanka boliisku qorayo in xaaladahaa kolka lagu jiro laga bilaabo wada-hadal marka hore.
Bishii diseembar ee sannadkii tagay 2014 ayuu si deg deg ah u haleeley cudur maskaxeed injineerka 28-jirka Sinthu Selvarajah waxa loo yaqaanno psykos.
Wuxuu bilaabay inuu dagaalamo, dabadeedna lagu xiray qol maran oo ku yaala qaybta maskaxda ee cusbital ku yaala magaalada Västerås. Shaqaalihii goobtaasi ayaa si khlad ah ugu fahmaay inuu sakiin qolka ku haystay, waana sababta dhalisay iney howl-wadeennadii cusbitalku u habar wacdaan ciidanka ammaanka.
Xaaaladaha noocani oo kale ah ayay ciidanka ammaanka waajib saaran ku tahay inay wadahadal ku bilaabaan iyo sidii ay xiriir ula sameeyn lahaayeen shakhsiga. Middaasina oo looga gol leeyahay sidii dhibaato iyo iska hor-imaad looga baxsan lahaa.
Hase yeeshee ey shantii boliiska aheyd ee goobta timid ey halkaa ku sugnaayeen oo keliya laba daqiiqadood kolkii ey go’aansadeen iyaga oo waaardiye la kaasshaneya iney xoog iyo weerar ku qaadaan – iyada oo aannu wada-hadal meesha ka dhicin.
– Muddadii gaabneyd ee ciidanka ammaanku uu goobta ku sugnaa marna la iskuma deyin in wada-hadal lala furo, xaqiiqdiina waa midda loo baahan yahay in la sameeyo, lagana haysto waayo-arag-nimo ballaaraan, sida ay sheegtay Annika Norée, kuna takhasustay culuunta dembiyada - straffrätt.
Muddo iminka lix bilood laga joogo ayaa hoos loo dhigay baaritaankii uu ciidanka ammaanku middaa isaga sameeeyay. Baaritaankaasina oo lagu sheegay in ciidanka ammaanku go’aansadeen inay weerar ku qaadaan Sinthu Selvarajah maadaama uu koofiyadda funaannadiisa inta madaxa saartay uu dhabarka xijiyay ciidanka ammaanka.
"Falka noocaas ahi wuxuu aniga iila muuqdaa in shakhsiga ku kacaa aannu diyaar u ahayn inuu dhageeysto ammarrda ciidanka ammaanka, taasina oo la macne ah in fal-dembiyeed u diyaargaroobaya, sida uu qoraal ku sheegay madaxii ciidanka ammaanka ee howshaasi …"
– In dhabarka un la aadiyo ciidanka ammaanka ama laga shakiyo un in shakhsigu hubeey-san yahay, maahan mid ku gar siinaysa ciidanka ammaanka inay xoog isticmaalaan, sida ay sheeegtay Annika Norée.
Dacwaddii hoosta loo dhigay muddo iminka laga joogo lix bilood ayaa dib kor loogu soo qaadaay iminka sidii baaritaan hor leh loogu sameeyn lahaa, kadib war-bixintii ay laanta wararka Ekot middaasi ka sameeysay. Wararkaa wixii ku soo kordhana dib ayaannu idiin kala soo socodsiin doonnaa.